Sarimihetsika fanoherana slip-gravy ratsy miatrika gitara
1. Mavesatra maivana, mety kokoa amin'ny trano avo sy fananganana tetezana.
2. Mora hitaona ny sarimihetsika, 1/7 amin'ny lasitra vy fotsiny.
3. Manaova beton-tarehy miendrika tarehy: ny ambonin'ilay zavatra narotsaka dia malama sy tsara tarehy, mihena ny fizotry ny plastering faharoa amin'ny rindrina, afaka handravaka mivantana ny veneer, mampihena ny vanim-pananganana 30%.
4. fanoherana ny harafesina, tsy misy loto amin'ny tampon'ny beton.
5. Fahombiazana tsara amin'ny insulation, izay manampy amin'ny fananganana ririnina.
6. Izy io dia azo ampiasaina ho modely fandaminana.
7. Fahaiza-miasa tsara. Ny fantsika, ny tsofa ary ny fandavahana dia tsara kokoa noho ny trondro vita amin'ny volotsangana sy ny bobongolo vy kely. Izy io dia azo alamina ho modely amin'ny endriny maro samihafa arakaraka ny filan'ny fananganana.
Wire-mesh Anti-slip Film Miatrika gitara
Raha ny karazan-tarehy / lamosina, ny hazo miendrika membrane dia azo zaraina ho takelaka manodidin-koditra manify sy tabilao tsy miendrika manify. Ity tabilao rindrina ivelany tsy misy slip ity dia manana sarimihetsika fenolika tsy mahazaka akanjo eny ambonin'ny faritra, izay mifamatotra amin'ny simika amin'ny alàlan'ny fanafanana sy fanerena. Matetika ampiasaina ho toy ny gorodona ho an'ny fiara ny hazo ambonin-tsarimihetsika manohitra ny slip.
1. Ny plywood film namboarina no karazana vokatra mora indrindra amin'ny tabilao modely manerantany.
2. Azo ampiasaina in-2-4 izy io amin'ny toe-javatra mahazatra.
3. Ataovy tonga plywood vaovao ny tabilao efa niasa, mitahiry loharanon-karena / ala.
Ny tabilao sulong dia tsy mampiasa afa-tsy plywood fanindroany voafantina tsara mba hiantohana ny kalitaon'ny fotony.
4. Efa vitaina mialoha ny plywood sulong, manandrama manadio ny fako vita amin'ny beton anatiny, misy 90% ny fahafaha-mivoaka azy.
Manana fanamarinana CE sy ISO
Sarimihetsika: sarimihetsika eo an-toerana / sarimihetsika nafarana, karazana tsy slip.
Loko: sarimihetsika mainty, sarimihetsika volontany, sarimihetsika maintso, sarimihetsika volondavenona, sarimihetsika mena, volontany mainty, volontany mena,
Fitaovana fototra: poplar, core hard, eucalyptus core, birch na core composite. Ampidiro ny fotony
Lakaoly: lakaoly melamine WBP na lakaoma fenetika WBP. Lakaoly melamine WBP na lakaoma phenolika WBP
Fampisehoana tantera-drano / WBP avo
Ny dingana manokana dia manafoana ireo triatra ao anatin'ny fotony.
Namboarina mifanaraka amin'ny zavatra takinao
Famokarana orinasa matihanina mandritra ny taona maro!
Mena miovaova plywood ny sarimihetsika
Ny tabilao avo lenta indostrialy dia midika fa hisy ny mariky ny horonan-taratasy, ny fako amin'ny sisiny ary ny gorodona maivana ery ambonin'izy ireo.
Kitapo phenolika, tabilao miatrika horonantsary, plywood resin phenolika, fototra birch Baltika
Tanjona mateza, malamalama, tontonana mora hadio ary tsy misy fofona, mety amin'ny sakafo misy sisin'ny maritrano tsy misy famehezana.
Fampiharana: Fitaovana sy kabinetra, fanaka ho an'ny ankizy, vokatra vita amin'ny hazo, latabatra maharitra, trano fisakafoanana, bobongolo vita amin'ny beton, fitaovana ary fitaovana.
Manana fanamarinana CE sy ISO.
Ity vokatra ity dia plywood birch 1/8 x 12 x 12
Mora sy tsotra ampiasaina
Any Chine ity vokatra ity
Plywood misy lafiny roa, azo atao ny mivory tsy voafetra
Ampio ny fombanao manokana isaky ny santimetatra ao aminy
Ity vokatra ity dia misy kasety 12 x 12 x 1,27 CM (habe eo ho eo)
Tena mety amin'ny karazana asa tanana rehetra
Fiaraha-miombona amin'ny filalaovana gitara
Sarimihetsika kininina kininina Eucalyptus mainty
Ny tabilao miatrika horonantsary no tena ampiasaina amin'ny sehatry ny fananganana. Noho izany, ny tabilao mifono horonantsary dia antsoina koa hoe plywood vita amin'ny rindrina, formwork vita amin'ny beton, ary formwork vita amin'ny beton. Noho io fampiasana farany io dia mazàna ny mpanjifa dia mila gitara rakotra horonantsary WBP, izay mety kokoa amin'ny rindrina amin'ny tetikasa lehibe. Fa misy ihany koa ny mpanjifa sasany izay mila plywood saronan'ny sarimihetsika MR, izay ampiasaina amin'ny jamba amin'ny tetikasa iraisana.
Sarimihetsika vita amin'ny plywood Birch volontany